Qalabka qaboojinta alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshadda-Shiinaha Telecom golaha wasiirada qaboojinta Soo-saareyaasha
Ku-beddelka kulaylka ee Isgaadhsiinta...
BlackShields bannaanka golaha wasiirada isku dhafan waxaa loogu talagalay isgaarsiin mobile qaybsan saldhigga saldhigga, kaas oo buuxin kara codsiga jawiga isgaarsiinta dibadda iyo rakibidda. Korontada, baytariga, qalabka qaybinta fiilooyinka (ODF), qalabka xakamaynta heerkulka (hawo-qaboojiyaha/kuleelka) ayaa lagu dhex dari karaa golaha wasiirada si loo daboolo codsiga macmiilka sidii dukaan joogsi ah.
Taxanaha BlackShields HC Combo Air conditioner waxaa loo qaabeeyey sidii xal tamar lagu badbaadinayo oo lagu xakameynayo jawiga golaha wasiirada ee jawiga gudaha iyo dibadda ee adag. Isku-darka qaboojiyaha AC ee leh DC Thermosiphon Heat beddelka, waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada kulaylka ee golaha gudaha iyo dibadda waxayna xaqiijisaa waxtarka tamarta ugu badan.
Taxanaha BlackShields HM DC Thermosiphon Heat beddelka waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo cimilada gudaha iyo dibadda jawiga gudaha iyo dibadda ee adag. Waa nidaam qaboojin dadban kaas oo ka faa'iidaysanaya tamarta beddeleysa wajiga si ay u qaboojiso gudaha golaha wasiirada. Waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada kulaylka ee golaha bannaanka waxaana si weyn loogu isticmaalaa gudaha iyo dibadda armaajooyinka iyo xirmooyinka qalabka elegtarooniga ah ee xasaasiga ah.
Cutubkani wuxuu si buuxda uga faa'iidaystaa kala duwanaanshaha heerkulka gudaha iyo dibadda ee dabeecadda. Heerkulka gudaha gudaha waxaa lagu qaboojiyaa iyadoo si wax ku ool ah looga faa'iidaysan karo uumiga qaboojiyaha. Isku-beddelka kulaylka aan tooska ahayn wuxuu ku salaysan yahay isku-dhafka dabiiciga ah, kaas oo ku wareegaya dareeraha wareegga wareegga tooska ah iyada oo aan loo baahnayn bamka caadiga ah ama kombareeyaha.
Kulaylka beddelka golaha wasiirada ee Telecom
Taxanaha BlackShields HE Heat beddelka waxaa loo qaabeeyey sidii xalka qaboojinta dadban ee lagu xakameynayo cimilada gudaha iyo bannaanka ee jawiga gudaha iyo dibadda ee adag. Waxay ka faa'iidaysataa heerkulka hawada dibadda, waxayna ku beddeshaa dib-u-kiciye qulqulaya counter hufan oo sarreeya oo markaas qaboojiya hawada gudaha gudaha golaha wasiirada taasoo dhalinaysa gudaha, qaboojiyey wareeg xiran. Waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada kulaylka ee golaha bannaanka waxaana si weyn loogu isticmaalaa gudaha iyo dibadda armaajooyinka iyo xirmooyinka qalabka elegtarooniga ah ee xasaasiga ah.
BlackShields TC TEC Qeybta qaboojinta Peltier ee golaha wasiirada waxaa loogu talagalay qaboojinta armaajo gudaha iyo dibadda ee gudaha iyo dibadda jawi adag. Waxay isticmaashaa tignoolajiyada heerkulbeegga waxaana loogu talagalay sahayda 48V DC. Waxay ka saari kartaa kulaylka xad-dhaafka ah qalabka elektaroonigga ah sida baytariyada ku jira xayndaabyada yaryar waana doorashada ugu fiican ee qaboojinta qaybta batteriga.
BlackShields DC qaboojiyaha waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo cimilada qalabka ee goobahan ka-baxsan ee leh jawi adag oo gudaha iyo dibadda ah. Iyada oo leh kombaresarada dhabta ah ee DC iyo taageerayaasha DC, waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada kulaylka ee golaha gudaha/dibadda waana doorashada wanaagsan ee saldhigyada saldhigyada leh awoodda dib loo cusboonaysiin karo ama awoodda Hybrid ee goobaha ka baxsan.
BlackShields AC taxane qaboojiyaha waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo cimilada golaha wasiirada isgaarsiinta gudaha iyo dibadda jawi adag. Iyadoo marinka hawada gaaban iyo hawada si fiican loo qaybiyey, waxay si wax ku ool ah u xallisaa dhibaatada kulaylka ee golaha gudaha / dibadda waana doorashada wanaagsan ee codsiga isgaarsiinta.